Ukupholisa inkqubo yogcino lwamandla Ababoneleli kunye neFactory - China Inkqubo yokugcina amandla okupholisa abavelisi
I-BlackShields EC uchungechunge oluphezulu lwe-air conditioner luyilwe njengesisombululo solawulo lwemozulu yenkqubo yokugcina amandla ebhetri (BESS). Ukuqwalasela malunga nesicelo sokulawulwa kwe-thermal yebhetri kunye nesakhiwo sesitya sokugcina amandla, i-air conditioner yenzelwe njengesisombululo esinokwethenjelwa nesisebenzayo sokulawula imozulu kunye nesakhiwo esiphakamileyo esiphezulu, ukuhamba komoya omkhulu kunye nokunikezelwa komoya ukusuka phezulu kwesitya.
BlackShields MC series unit ukupholisa ulwelo iyunithi yokupholisa amanzi leyo eyenzelwe ukulawula imozulu yenkqubo yokugcina amandla ebhetri. Ngoyilo lwe-mono-block, i-compact structure, i-top outlet, kufuphi nomthombo wokushisa, umthamo ophezulu wokushisa, ingxolo ephantsi kunye nokuphendula ngokukhawuleza, iyunithi yokupholisa ulwelo ingaba sisisombululo esiphezulu kunye nesithembekileyo sokupholisa i-BESS.
I-BlackShields EC uchungechunge lwe-monoblock air conditioner yenzelwe njengesisombululo solawulo lwemozulu kwinkqubo yokugcina amandla. Ukuqwalasela malunga nesicelo sokulawula ukushisa kwebhetri kunye nesakhiwo sesitya sokugcina amandla, i-air conditioner yenzelwe njengesisombululo esinokwethenjelwa nesisebenzayo sokulawula imozulu kunye nesakhiwo se-monoblock, ukuhamba komoya omkhulu kunye nokunikezelwa komoya ophezulu.